SSD DISK NDỤ: NNYOCHA. ESI CHỌPỤTA OGE SSD GA-ARỤ ỌRỤ - DISK - 2019
SSD metụtara isiokwu (ike siri ike - steeti siri ike) disks, n'oge na-adịbeghị anya, na-ewu ewu (o doro anya na ọ na-emetụta nnukwu ọchịchọ maka diski dị otú ahụ). Site n'ụzọ, ọnụahịa ha na oge (echere m na oge a ga-abịa n'oge na-adịghị anya) ga-adị ka ụgwọ nke diski ike (HDD) mgbe niile. Ee, ugbu a, 120 GB SS mbanye na-akwụ ụgwọ ihe dị ka 500 GB HDD (site na ọnụ ọgụgụ nke SSDs, n'ezie, ọ bụghị ezuru, ma ọ bụ ọtụtụ ugboro ngwa ngwa karịa ọsọ!).
Ọzọkwa, ọ bụrụ na imetụ olu - mgbe ahụ, ọtụtụ ndị ọrụ adịghị mkpa ya. Dịka ọmụmaatụ, Enwere m 1 TB nke diski diski ike na PC m, ma ọ bụrụ na m na-eche banyere ya, ana m eji 100-150 GB nke olu a (Chineke gbochie) (ihe ọ bụla ọzọ nwere ike wepụ: a na ebudatara ma ugbu a dị echekwara na disk ...).
N'isiokwu a, achọrọ m ịnọ na otu n'ime nsogbu ndị kachasị mkpa - oge ndụ SSD (ọtụtụ akụkọ ifo banyere isiokwu a).
Otu esi achọputa oge ole SSD ga-arụ ọrụ (atụmatụ siri ike)
Nke a bụ ma eleghị anya ajụjụ kachasị egwu ... Na netwọk taa, enweela ọtụtụ mmemme maka ịrụ ọrụ na ngwa SSD. Echere m, na iji nlezianya nyochaa arụmọrụ nke ụgbọala SSD, maka ịnwale na ọ ka mma iji ọrụ - SSD-LIFE (ọbụna aha ahụ bụ nkwenye).
Ebe nrụọrụ weebụ: //ssd-life.ru/rus/download.html
A obere ọrụ na-achọ ngwa ngwa nyochaa steeti SSD. Na-arụ ọrụ n'ime Windows OS niile a ma ama: 7, 8, 10. Na-akwado Russia. Enwere nsụgharị na-adịghị mkpa ka a rụnye ya (njikọ e nyere n'elu).
Ihe niile achọrọ n'aka onye ọrụ iji nyochaa diski bụ ibudata ma bido ọrụ ahụ! Ihe atụ nke ọrụ na fig. 1 na 2.
Fig. 1. M4 128GB dị mkpa
Sentinel siri ike
Ebe nrụọrụ weebụ: http://www.hdsentinel.com/
Nke a bụ ezigbo onye nche nke disks gị (site na ụzọ, site na Bekee. Aha nke usoro ihe omume ahụ dị ka otu a sụgharịrị). Usoro ihe omume ahụ na-enye gị ohere ịlele arụmọrụ disk, nyochaa ahụike ya (lee fig 3), chọpụta ọnọdụ okpomọkụ nke diski na usoro ahụ, hụ akwụkwọ SMART, wdg. N'ozuzu - ngwá ọrụ dị ike (megide akpa uru).
N'ime mmezigharị: a na-akwụ ụgwọ ihe omume ahụ, mana e nwere ntụgharị ikpe na saịtị ahụ.
Fig. 3. Nyocha Disk na usoro Hard Disk Sentinel: diski ga-adị ndụ ma ọ dịkarịa ala 1000 ụbọchị na ọkwa nke ugbu a (ihe dị ka afọ 3).
Oge ndụ SSD: akụkọ ifo ole na ole
Ọtụtụ ndị ọkachamara maara na SSD nwere ọtụtụ ederede / ideghari oge (n'adịghị ka HDD). Mgbe a ga-arụ ọrụ usoro ihe omume ndị a (ya bụ, a ga-edekọ ozi ahụ ọtụtụ ugboro), mgbe ahụ, SSD agaghị adị mfe.
Ma ugbua abughi ugwo ihe siri ike ...
Ọnụ ọgụgụ nke usoro mgbagha nke SSD nwere ike imeri bụ 3000 (na ọnụ ọgụgụ nke disk dị ugbu a nwere, dịka ọmụmaatụ, disks na 5000). Naanị chee na olu nke diski gị bụ 120 GB (ike disk kachasị ama taa). Were ya na ị na-edegharị banyere 20 GB na diski kwa ụbọchị.
Fig. 5. Nkwupụta arụmọrụ disk (tiori)
Ọ na-apụta na diski dị na tiori na-arụ ọrụ ruo ọtụtụ iri afọ (mana ị ga-echeba na ibu ọrụ nke disk disk + ndị na-emepụta na-ekwekarị maka "ezughị okè", ya mere o yighị ka ị ga-enweta otu zuru oke). N'iburu nke a n'uche, ọnụ ọgụgụ nke afọ 49 (lee fig 5) nwere ike ịkekọrịta ya na ọnụọgụgụ site na 5 ruo 10. Ọ na - apụta na disk "etiti" na ọnọdụ a ga - adịru ala ma ọ dịkarịa ala afọ ise (n'eziokwu, dịka otu nkwa ahụ ka ọtụtụ ndị na - emepụta Ngwa SSD)! Ọzọkwa, mgbe oge a gasịrị, ị (ọzọ, na tiori) ka nwere ike ịgụ ozi sitere na SSD, ma dee ya - agaghịkwa.
Tụkwasị na nke ahụ, anyị na-atụle oge usoro rewrite weere ọnụ ọgụgụ dị elu nke 3000 - ugbu a, e nwere disks nwere ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke usoro mgbagwoju anya. Nke a pụtara na oge nkwekọrịta ahụ nwere ike ịbawanye ụba na ya!
Ị nwere ike gbakọọ ole diski ga - arụ ọrụ (na tiori) iji oke dị ka "Ọnụ ọgụgụ octets edepụtara (TBW)" (na - emekarị, ndị na - emepụta na - egosi nke a na njirimara nke diski). Dịka ọmụmaatụ, uru ọnụahịa nke 120 Gb bụ 64 Tb (ya bụ, ihe dị ka 64,000 GB nke ozi nwere ike idekọ na diski tupu ọ ghọọ ekwesighi). Site na mgbakọ na mwepụ mgbagwoju anya, anyị ga - enweta: (640000/20) / 365 ~ 8 afọ (diski ga - arụ ọrụ maka ihe dị ka afọ 8 mgbe nbudata 20 GB kwa ụbọchị, ana m akwado itinye njehie nke 10-20%, mgbe ahụ, ọnụ ọgụgụ ahụ ga - abụ ihe dị ka afọ 6-7) .
Ọnụ ọgụgụ nke bytes na-ede (TBW) bụ ngụkọta data niile nke a ga-edere na ụgbọala siri ike na steeti a kapịrị ọnụ tupu ụgbọala ahụ eruo njedebe ịgba.
Ma ugbua ajụjụ a (maka ndị na-arụ ọrụ maka PC maka afọ 10): ị na-arụ ọrụ na disk nke i nwere afọ 8-10 gara aga?
Enwere m ndị a na ha bụ ndị ọrụ (n'echiche ha nwere ike iji). Naanị nha ha adịkwaghị ka mgbagwoju anya nke oge a (ọbụlagodi igwefụfụ nke oge a hà nhata olu na diski dị otú ahụ). M na-eduga n'eziokwu ahụ bụ na mgbe afọ ise gasịrị, diski a adịtụghị aka - na gị onwe gị agaghị enwe ike iji ya. Ọtụtụ mgbe, nsogbu na SSD sitere na:
- arụpụtaghị mma nke ọma, mmepụta nke onye ọrụ;
- voltaji tụlee;
- ọkụ eletrik.
Nkwubi okwu a na-enye aka na ya:
- ma ọ bụrụ na ị na-eji SSD dị ka usoro diski maka Windows - mgbe ahụ, ọ bụghị ihe niile dị mkpa (dị ka ọtụtụ ndị na-akwado) iji nyefee faịlụ paging, folda nwa oge, cache nchọgharị, wdg na disks ndị ọzọ. N'agbanyeghị nke ahụ, SSD dị mkpa iji mee ka usoro ahụ dịkwuo elu, ọ na - apụta na anyị na - ewepụ ya na omume dị otú ahụ;
- maka ndị na-ebudata ọtụtụ gigabytes nke ihe nkiri na egwu (kwa ụbọchị) - n'ihi na ugbu a, ọ ka mma ka ha jiri HDD rụọ ọrụ (na-abụghị SSDs nwere oke nchekwa nchekwa (> = 500 GB), ha ka na-ebuwanye ibu karịa HDDs. Na mgbakwunye, maka fim na egwu, ọ dịghị mkpa ka SSD dị ọsọ.
Enwere m ya, ihe ọma!